‘सरकारले कार्यशैली बदल्न नसक्दा असारे विकास दोहोरियो’
नेपाली पब्लिक शुक्रबार, जेठ २४, २०७६ १३:१४
वर्तमान नेपाली राजनीतिक क्षेत्रकी चर्चित एवं लोकप्रिय नेत्री हुन् रामकुमारी झाँक्री। उनी हकी, निडर र प्रभावशाली महिला नेत्रीका रूपमा समेत परिचित छन्। समसामयिक विषय वस्तु, राजनीतिक एजेन्डा र सरकारका क्रियाकलापहरूका बारेमा खुलेर धारणा राख्दै आएकी नेत्री झाँक्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्यसँगै प्रतिनिधि सभा सांसद पनि हुन्।
धेरै पहिले नपुगेर केही दिन पहिलेको कुरालाई स्मरण गर्ने हो भने नेत्री झाँक्रीले राष्ट्रपति संस्थाका रूपमा विकास गर्न र जनताको जीवन स्तरलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रपतिले सवार गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। उनले आफू राष्ट्रपति भएको भए ‘जनतासँग हात मिलाएर हिँड्ने थिएँ’ सम्म भनेकी थिइन्।
साधारण जनतादेखि नेतासम्मको विरोधपछि संयोग भन्नुपर्छ, जेठ २३ गते बाँके पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीले खास प्रभाव नपारेको समाचारहरू आए। उनै नेत्री रामकुमारी झाँक्रीसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपाली पब्लिकका लागि धनराज वास्तविकले गरेको कुराकानीः
सरकारले असारे विकासमा प्रारम्भिक दुई महिनामा गरेको खर्चबराबर चार दिनमै स्वाहा गर्‍यो। यसमा तपाईंको धारण के छ?
– सरकार असारे विकासमा जुट्नु राम्रो कुरा होइन। दुई तिहाइको सरकार यस्ता अनियमितता र बिचौलियाहरूका फन्दामा पर्नु स्वभाविक होइन। यस कार्यमा सरकार मात्रै दोषी छैन, यसमा कर्मचारी प्रशासन, निजी क्षेत्र र काम गर्ने संयन्त्रहरूको मुख्य कमजोरी छ। यसकारण जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने थियो। त्यसो हुन सकेन। आज २ महिनामा गरिएको बराबरको खर्च ४ दिनमा गरिएको छ।
यो चालू खर्चले दिगो विकास र जनतालाई फाइदा पुग्दैन। बिचौलियाहरू मोटाउने मौका पाउँछन्। केही ठूला नेता, कर्मचारी र पहुँचमा रहेका मानिसहरूको खल्तीमा चालू खर्च पुग्छ। यो पुरानो रोग हो। यसको निराकरण गर्नु आजको चुनौती हो। सरकारले यसका बारेमा गहन भएर सोच्नुपर्छ। असारे विकासको नाममा जे हुँदै छ, यो समाज र देशका लागि ठीक हुँदै छैन।
यो असारे विकासको चटारो कहिले अन्त्य हुन्छ?
– निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले गत वर्ष पनि यही भनेको थिएँ। योजना तर्जुमा गर्दा, योजना निर्माण गर्दा, रातो किताबमा योजना समावेश गर्नुपूर्व छलफल गरौँ। उपयुक्त निर्माण कम्पनी, संस्था, क्षेत्र, संयन्त्र र पक्षलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। मैले यही कुरा बारम्बार भन्दै आएकी छु। यो रोग अर्को वर्ष पनि दोहोरिन्छ। यो वर्ष पनि आयोजना, योजनाहरू पहुँचका आधारमा तर्जुमा गरिएका छन्।
डीपीआर तयार भएको छैन। कुनै तयारी छैन। उपभोक्ताको जिम्मा लगाएर राष्ट्रिय ढुकुटी सक्ने काम भइरहेका छन्। यसका बारेमा म संसदमा बोल्ने नै छु। केही मन्त्रालयका योजनाहरूलाई हेर्दा अर्को वर्ष पनि आजकै हालत हुने पक्का छ। यसरी नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई बिचौलियाहरूको भरणपोषणका खातिर खर्च गर्ने काम गलत हो। यसको अन्त्य निश्चित छ।
दुई तिहाइको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्नुका कारण के हो?
– कानून बन्यो। स्थिर सरकार गठन भयो। यस सरकारले दुईवटा आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजनसमेत ग¥यो। तर, सरकारले काम गर्ने तौरतरिका पत्ता लगाउन सकेन। कर्मचारी प्रशासनले नियम कानूनको इमानदार भएर पालना गरेनन्। विद्यमान नियम, कानूनसँगै कर्मचारी प्रशासनको ढाँचामा परिवर्तन आउन सकेन। मुलुकको जिम्मेवारी लिएको सरकार र कर्मचारी प्रशासन जवाफदेही बन्न सकेन। यसको खास कारण बिचौलियाहरूको प्रभाव छ। यसको समूल अन्त्य आजको आवश्यकता हो। अर्को कुरा, संसदका विभिन्न समितिले सरकारलाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आइरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर पहुँचवालाभन्दा समानुपातिक विकास निर्माणलाई ध्यान दिनुपर्छ।
‘कौडीको भाउको तक्मा बिहेमा लगाउने कि मलामी जाँदा ?’
रामकुमारी झाँक्री कड्किएपछि मन्त्री बिना मगरको बोल्ती बन्द
साना साना कुरा देखाएर बिल भुक्तानी नगर्नु पनि असारे विकासको कारक तत्त्व हो। भुक्तानी रोक्नुका विभिन्न कारण देखाइन्छ। भुक्तानी दिनुपर्ने समयमा लाभ वा स्वार्थ हेरिन्छ। अनि कसरी मुलुकको विकास हुन्छ? आफूखुशी योजना तय गर्दा पनि यस्ता समस्याहरू आइलागेका हुन्। स्थानीय जीवनलाई आधार मानेर पो विकासका योजनाहरू वितरण गर्नुपर्ने हो। कुनै पनि योजनाहरूबाट जनता कति लाभान्वित हुन्छन्? योजनाको स्तर के हो? यी विषयमा विचार नै पुर्‍याइँदैन। शक्तिशाली व्यक्ति, नेता, नाता सम्बन्धका आधारमा खल्तीबाट योजना तय गरिने हुँदा समस्या सिर्जना भएका हुन्। सरकारले पहल गरिरहेको छ। प्रयास गरिरहेको छ। तर, त्यो प्रयास अपुग छ। पर्याप्त चाहिएको हो।
सरकार वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर जान खोज्दैछ। अर्थ समितिले दिएको निर्देशनसमेत टेर्दैन नि?
– समितिहरूका आआफ्नै क्षेत्राअधिकार छन्। सरकारले उपयुक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। पुँजीगत खर्च नहुनुको पहिलो कारण शक्तिशाली मानिसको खल्तीबाट योजना वितरण गरिने हुँदा यस्ता समस्या आएका हुन्। सरकारलाई हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ। सरकार बिचौलियाहरूको फन्दाबाट मुक्त हुनुपर्छ। बिचौलियाहरूको ललिपपले निहित स्वार्थबाहेक जनताको भलाइ हुँदैन। यसमा सरकार सचेत रहनुपर्छ। सरकारी प्रतिनिधि, कर्मचारी, शक्तिशाली व्यक्ति, नेता जो कोहीले बिचौलियाहरूले दिने महँगा घडी, फोन, घर घडेरी र कारजस्ता उपहारसँग जनताको मतलाई बेच्नु भएन। आफ्नो कर्तव्य भुल्नु भएन। व्यवस्थित योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। विकास समन्यायिक हुनुपर्छ । व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा गरिने विकासले दिगो लक्ष्य हासिल गर्दैन।
उपयुक्त विकासको विकल्प के हो त?
– दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजनाहरूको छनोट, तर्जुमा र कार्यान्वयनका बारेमा छलफल हुनुपर्छ। विकास जनताको जीवनसँग जोड्नुपर्छ। विकासले जनताको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नसक्नु पर्छ। सरकारले अविलम्बन गरेका योजनाहरू आफ्नै रोहवरमा राखेर काम गर्नुपर्छ। बिचौलियाहरूको हातमा पारेर देश बर्बाद बनाउने काम गर्नु हुँदैन। बिचौलियाले प्रभाव नपारेको कुनै ठाउँ छैन। अड्डा अदालतदेखि सरकारसम्म, कर्मचारीदेखि किसानसम्म यस्तो बिगबिगी छ। असली किसानबाट ४० रुपैयाँको तरकारी हामीले एक सय ५० रुपैयाँले किन्नुपर्छ। योजनाहरूमा सबैभन्दा ठूला बिचौलिया छन्।
यस्ता गलत मनसाय राखेका मानिसलाई कसरी तह लगाउने? त्यो कुरा सरकारमा निर्भर रहन्छ। हालै एक व्यक्तिले तुइन विस्थापितका लागि एक करोड रुपैयाँ दिनुभयो। बिचौलिया हाँसेर समात्नुभयो। प्रश्न उठ्छ, त्यो एक करोड ती व्यक्तिले कहाँबाट ल्याए? उनको आयस्रोत के हो? मलाई त यो प्रश्न गर्न मन लागेको थियो। यहाँ कानून नभएर होइन, कानूनको पालना नगर्नाले यी समस्या आइलागेका हुन्। यसमा हामी सबैको कमजोरी छ। हामी सबैको दोष छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २४, २०७६ १३:१४